Orinasa Fanalamanga : Nirehitra ny orinasa fitehirizana solika -
AccueilSongandinaOrinasa Fanalamanga : Nirehitra ny orinasa fitehirizana solika
25/09/2018 admintriatra Songandina 0
Nampidina « essence » noho ny hafanana no nahatonga ny afo nirehitra, omaly antoandro, teny amin’ny manodidina ny orinasa iray mpitahiry solika tany Moramanga. Akora mora mirehitra no kirakiraina ato amin’ity orinasa ity, ary efa fatratra tokoa ny fitandremana amin’ny afo, kanefa dia izao izy tra-doza izao. Raha ny loharanom-baovao azo mantsy dia loza voajanahary no nahavoa ity orinasa ity. Indroa nirefotra ny solika noho ny andro nafana, tokony ho tamin’ny 11 ora latsaka, ary samy nianjera tao amin’ity orinasa ity avokoa, izay antony nahatonga ny firehetana. Na dia teo aza ny fiaraha-misalahy dia tsy nanakana ny afo tsy hihitatra izany.
Niezaka namono izany tamin’ny alalan’ny fitaovana tao an-toerana ihany ireo mpiasa, kanefa tsy nety voafehy ny afo fa vao mainka nihitatra. Soa ihany fa nalaky tonga ny teo anivon’ireo sampana mpamonjy voina. Akaiky kokoa moa ireo teo amin’ny manodidina, ka ireo no tonga voalohany tety an-toerana, narahin’ny mpamonjy voina avy eo. Nanano sarotra ho an’ireo mpamonjy voina ny nifehezana ny afo, raha ny angom-baovao. Soa ihany fa tsy nisy olona naratra, na namoy ny ainy tao anatin’ny voina nahazo ity orinasa mpitahiry solika ity. Na dia ny ampahany tamin’ireo vatan-trano ihany aza no izao may izao, hatreto dia mbola tsy fantatra mazava izay zavatra may sy simba tao anatiny. Ny angom-baovao azo fotsiny dia nisy entana marobe sy fitaovana lasa lavenona tao anatiny, ary tombanana ho an-tapitrisany mahery any ho any ny teti-bidin’ny zavatra simba tao anatin’izany fahamaizana izany. Izany tokoa no hoe, azo lazaina ho loza voajanahary no niseho, saingy nisy kosa ny tsy fitandremana nataon’ireo olona.
Razafindrakoto Eddie Charles 55 taona , Razafindrakoto Andry 13 taona, Ranaivoarisoa Claude 65 taona, Razafimanantsoa Kevin 23 taona ary Andrianarijaonina Mamy Tahiana 26 taona, ireo olona dimy namoy ny ainy vokatry ny fianjerana fiaramanidina teny ...Tohiny